နှစ်ယောက်သားစကားများရန်ဖြစ်နေတာကို မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြေလည်သွားစေမယ့် နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေ – Trend.com.mm
Posted on February 6, 2019 by Noel
အချိန်ကြာကြာစကားများရန်ဖြစ်လေ မပြီးဆုံးလေပါပဲ။ညှိလို့မရ နားလည်မှုယူမရနဲ့ ဖြစ်လာရင် နှစ်ယောက်လုံးစိတ်ညစ်ကြရမှာပါ။ဘယ်သူမှ ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့အကြာကြီးစိတ်ဆိုးရန်ဖြစ်ချင်မှာမဟုတ်ပါဘူးနော်။ဒါကြောင့် ချစ်သူနဲ့စကားများရန်ဖြစ်တဲ့အခါ မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြန်ပြေလည်သွားစေမယ့်နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေကိုပြောပြချင်ပါတယ်။ဒီနည်းလေးတွေက ယူတို့အတွက် တကယ်အထောက်အကူဖြစ်စေမှာပါ
စကားများရန်ဖြစ်နေတယ်။တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ညိနှိုင်းနေတာလည်းမပြီးသေးဘူး။ဒါပေမဲ့ အငြင်းပွားရန်ဖြစ်တာကိုရပ်စဲချင်ပြီဆိုရင် လက်ကလေးကိုကိုင်ပြီးစကားပြောလိုက်တာ၊ပုခုံးလေးကိုဖက်ပြီး စကားပြောတာမျိုးလုပ်ပါတဲ့။ဒီလိုရိုးရှင်းတဲ့အထိအတွေ့လေးတွေက စိတ်ခံစားချက်ကို နူးညံ့ပျော့ပျောင်းသွားစေတယ်လို့ အချစ်ရေးအကြံပေးသူ Heather Claus က ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒေါသတကြီးနဲ့ဖြေရှင်းမယ့်အစား အခုလိုပြေပြေလည်လည်ဖြေရှင်းတာပိုကောင်းတယ်မဟုတ်လား?
ကိုယ်မကျေနပ်တဲ့အရာတွေကိုစုပုံပြောချလိုက်မယ့်အစား ကုိုယ်လိုအပ်တာ သူလိုချင်တာတွေကို သေးငယ်တဲ့ကိစ္စလေးတွေကို အရင်ညှိနှိုင်းပါ။အဲ့ဒါမှ ရှေ့ဆက်ပြီး ကိစ္စကြီးတွေကို အေးဆေးညှိနှိုင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ရန်ဖြစ်နေရင်တောင် ကိုယ့်ချစ်သူကို စကားလုံးခပ်ကြမ်းကြမ်းတွေပြောတာ၊ဆဲဆိုတာ၊လက်ပါတာတွေမလုပ်မိပါစေနဲ့။အဲ့ဒီလိုလုပ်တာက အခြေအနေကိုပိုဆိုးသွားစေပါတယ်။စကားလုံးကိုသေချာရွေးချယ်သုံးနှုန်းပါ
ကိုယ်လိုချင်တာ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာကြီးပြောမနေပဲ ပြဿနာအစကို သေချာပြန်သွားပါ။ဘာလို့ဒီပြဿနာဖြစ်ရတာလဲ အကြောင်းရင်းကိုရှာပါ။ဒေါသတကြီးနဲ့ အော်ဟစ်ရန်ဖြစ်နေမယ့်အစား နှစ်ယောက်သားခေါင်းအေးအေးနဲ့ ပြဿနာရဲ့အရင်းခံကို ပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားပါ
တစ်ခါတစ်လေ စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်နေပေမဲ့ လမ်းလျှောက်လိုက်တဲ့အခါ သီချင်းနားထောင်လိုက်တဲ့အခါ စိတ်ကပြန်ပြေသွားတတ်ပါတယ်။လမ်းလျှောက်လိုက်တာက စိတ်ကိုထိန်းပေးပြီး တည်ငြိမ်စေတဲ့အတွက် စိတ်ဖိစီးမှုလည်းလျော့ကျလာပါတယ်။ဒါကြောင့် နှစ်ယောက်သားရန်ဖြစ်စကားများဖို့ တာဆူနေပြီဆိုရင် လက်ချင်းတွဲပြီး လမ်းနည်းနည်းလျှောက်လိုက်ပါ။ဒါဆိုရင် ဒေါသတွေလျော့ကျလာပြီး အေးအေးဆေးဆေးညှိနှိုင်းနိုင်ပါလိ့မ်မယ်။
အခြိနျကွာကွာစကားမြားရနျဖွဈလေ မပွီးဆုံးလပေါပဲ။ညှိလို့မရ နားလညျမှုယူမရနဲ့ ဖွဈလာရငျ နှဈယောကျလုံးစိတျညဈကွရမှာပါ။ဘယျသူမှ ကိုယျ့ခဈြသူနဲ့အကွာကွီးစိတျဆိုးရနျဖွဈခငျြမှာမဟုတျပါဘူးနျော။ဒါကွောငျ့ ခဈြသူနဲ့စကားမြားရနျဖွဈတဲ့အခါ မွနျမွနျဆနျဆနျပွနျပွလေညျသှားစမေယျ့နညျးလမျးကောငျးလေးတှကေိုပွောပွခငျြပါတယျ။ဒီနညျးလေးတှကေ ယူတို့အတှကျ တကယျအထောကျအကူဖွဈစမှောပါ
စကားမြားရနျဖွဈနတေယျ။တဈယောကျနဲ့တဈယောကျညိနှိုငျးနတောလညျးမပွီးသေးဘူး။ဒါပမေဲ့ အငွငျးပှားရနျဖွဈတာကိုရပျစဲခငျြပွီဆိုရငျ လကျကလေးကိုကိုငျပွီးစကားပွောလိုကျတာ၊ပုခုံးလေးကိုဖကျပွီး စကားပွောတာမြိုးလုပျပါတဲ့။ဒီလိုရိုးရှငျးတဲ့အထိအတှေ့လေးတှကေ စိတျခံစားခကျြကို နူးညံ့ပြော့ပြောငျးသှားစတေယျလို့ အခဈြရေးအကွံပေးသူ Heather Claus က ပွောခဲ့ပါတယျ။ဒေါသတကွီးနဲ့ဖွရှေငျးမယျ့အစား အခုလိုပွပွေလေညျလညျဖွရှေငျးတာပိုကောငျးတယျမဟုတျလား?
ကိုယျမကနြေပျတဲ့အရာတှကေိုစုပုံပွောခလြိုကျမယျ့အစား ကိုယျလိုအပျတာ သူလိုခငျြတာတှကေို သေးငယျတဲ့ကိစ်စလေးတှကေို အရငျညှိနှိုငျးပါ။အဲ့ဒါမှ ရှဆေ့ကျပွီး ကိစ်စကွီးတှကေို အေးဆေးညှိနှိုငျးနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
ရနျဖွဈနရေငျတောငျ ကိုယျ့ခဈြသူကို စကားလုံးခပျကွမျးကွမျးတှပွေောတာ၊ဆဲဆိုတာ၊လကျပါတာတှမေလုပျမိပါစနေဲ့။အဲ့ဒီလိုလုပျတာက အခွအေနကေိုပိုဆိုးသှားစပေါတယျ။စကားလုံးကိုသခြောရှေးခယျြသုံးနှုနျးပါ
ကိုယျလိုခငျြတာ ကိုယျဖွဈခငျြတာကွီးပွောမနပေဲ ပွဿနာအစကို သခြောပွနျသှားပါ။ဘာလို့ဒီပွဿနာဖွဈရတာလဲ အကွောငျးရငျးကိုရှာပါ။ဒေါသတကွီးနဲ့ အျောဟဈရနျဖွဈနမေယျ့အစား နှဈယောကျသားခေါငျးအေးအေးနဲ့ ပွဿနာရဲ့အရငျးခံကို ပွလေညျအောငျဖွရှေငျးဖို့ကွိုးစားပါ
တဈခါတဈလေ စိတျဆိုးဒေါသထှကျနပေမေဲ့ လမျးလြှောကျလိုကျတဲ့အခါ သီခငျြးနားထောငျလိုကျတဲ့အခါ စိတျကပွနျပွသှေားတတျပါတယျ။လမျးလြှောကျလိုကျတာက စိတျကိုထိနျးပေးပွီး တညျငွိမျစတေဲ့အတှကျ စိတျဖိစီးမှုလညျးလြော့ကလြာပါတယျ။ဒါကွောငျ့ နှဈယောကျသားရနျဖွဈစကားမြားဖို့ တာဆူနပွေီဆိုရငျ လကျခငျြးတှဲပွီး လမျးနညျးနညျးလြှောကျလိုကျပါ။ဒါဆိုရငျ ဒေါသတှလြေော့ကလြာပွီး အေးအေးဆေးဆေးညှိနှိုငျးနိုငျပါလိ့မျမယျ။